Kooxaha Mucaaradka Suuriya Oo Ogolaaday in Hubkooda Ay Ku Wareejiyaan Dowladda Ruushka
Saturday July 07, 2018 - 09:12:59 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in duqeymo xooggan oo aan kala joogsi laheyn ay markale ka dhaceen deegaanno dhowr ah oo ku dhow xuduud beenaadka udhaxeeya Urdun iyo Suuriya.
Duqeymaha oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Nidaamka Bishaar Al-asad waxaa barbar socda duullaan ballaaran oo dhanka dhulka ay ka fulinayaan ciidamada cadawga Jinsiyadaha kala duwan leh ee hororka ku ah dhulalka muslimiinta sunniga ah.
Ragga Firfircoon ee soo tabiya dagaalka Suuriya ka socda ayaa sheegay in wax ka badan 700 oo duqeymo ah ay ku dhaceen degmooyin katirsan gobolka Darcaa lagasoo billaabo maalintii arbacada.
Kumanaan katirsan ciidamada Bishaar Al-asad oo ay kaabayaan ciidamada Ruushka iyo maleeshiyaad iiraaniyiin ah ayaa shalay la wareegay deegaanno kaabiga ku haya marin xuduudeedka Al-nasiib oo ay horay umaamulayeen xoogaga mucaaradka ah.
Afhayeen u hadlay maamulka Nuseyriga Bishaar Al-asad ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku dhow yihiin Marin xuduudeedka kala qeybiya Urdun iyo Suuriya oo gacanta nidaamka ka baxay horraantii sanaddii 2012.
Dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in heshiis horudhac ah ay gaareen saraakiil katirsan dowladda Ruushka iyo kooxaha mucaaradka dabadhilifyada ah.
Sarkaal u hadlay kooxaha ka dagaallama Koonfurta Suuriya ayaa sheegay in wadahadal dheer kadib ay ogolaadeen in hubka culus ay ku wareejiyaan dowladda Ruushka ayna ka baxaan magaalooyin katirsan gobolka Darca oo qabsan doonaan ciidamada Booliska dowladda Ruushka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha Ruushka ay ku qanciyeen kooxaha mucaaradka in ay ogolaadaan xabad joojin taas bedelkeedna ciidamada Al-asad ay dib uga guran doonaan illaa afar tuulo oo horay uga qabsadeen gobolka darcaa.
Wali waxaa socda ayaa laleeyahay wadahadallada oo lafilayo in ay kusoo dhammaadaan in kooxahan ay isku dhiibaan cadowga, sidoo kale qodobada lagu heshiiyay waxaa kamid ah in ciidamada Nidaamka Nuseyriga ay qabsadaan Marin xuduudeedka kala qeybiya Urdun iyo Suuriya oo marin u ahaa Boqolaal kun shacab Barakacayaal ah oo isaga firxanayay gummaadka cadawga jinsiyadaha kala duwan leh uu ka wado Koonfurta wadanka.
Dowladda Nasaarada Ruushka iyo xulufadeeda Iiraan ayaa umuuqda in masiirka gobolka Darca ay marsiinayaan halkii ay marsiiyeen Xalab,Ghuudada bari iyo ximis halkaas oo kumanaan kun shacab muslimiin ah ay ku xasuuqeen.